Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 07/06/2020)
Ọ bụrụ na nke a bụ gị oge mbụ njem ụgbọ okporo ígwè, e doro anya na ọ ga-nke mbụ n'ime ọtụtụ. n'eziokwu, onye ọ bụla nke na-nyere njem ụgbọ okporo ígwè a ohere wee wezuga crazy n'ime ya! Gịnị? N'ihi na ọ bụ ebube! N'adịghị ka ihe na-abụghị onye ụgbọelu agafe, iru ala ụgbọ ala tours ma ọ bụ ụzọ-kwa-eme ịnyịnya ụgbọala, a ụgbọ okporo ígwè na njem bụ mma, ngwa ngwa ma incredibly maa mma na ihunanya. Otu nwere ike na-arụ ụka na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ ezigbo mix of Virginia Woolf anọghị itinye uche na oge a na-irè. ah, ị ga-ahụ ya maka onwe gị na-ama.
Anyị nwere ike ekwe nkwa na ị ga na na Itan Hawke – Julie Delpy Train Journey ọnọdụ na gị mbụ ụgbọ okporo ígwè (Oh, Bịanụ, anyị na-na na niile hụrụ na swooned n'elu The Tupu trilogy, na nzuzo, na-enwe olileanya na anyị ga-enwe otu akụkọ ịhụnanya na-eme anyị.) Tiekwa mkpu gị shei ka ahụmahụ ime. Olee otú ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi, na-akpali akpali, na fun mkparịta ụka ị ga-enwe? Ahụmahụ na-na na-emekọ ihe ndị mmadụ n'obodo dị iche iche bụ a mma mmetụta! Ọ dịghị mgbe ị maara otú ọtụtụ ndị mara mma enyi ị ga-ewu, otú ọtụtụ azọpịa ị ga ma ọ bụ otú ọtụtụ breathtaking mmadụ ị ga-izute. Ọ bụrụ na ị na-na na-adịghị oke ihere, ịbụ onye mbụ na-agbaji ice na okwu ndị ị na-ahụ na-akpali.
Inggagharị n’otu n’otu ma n’ụbọchị ndị pụrụ iche lowers price budata maka ụgbọ okporo ígwè tiketi (ee, ị pụrụ n'ezie na-a ego na gị tiketi ka, asị, Trenitalia ma ọ bụrụ na ị na-aga na ngwụsị izu). Ọ na-enye gị onye na-ekerịta ahụmahụ na na-ahụ ihe n'aka ndị ọzọ si n'ọnọdụ. na, na – ịlụ otode ke a mba ọzọ Europe obodo bụ maa mma n'etiti ndị ị maara karịa eme ya solo… ọ bụ na anyị nri ma ọ bụ ka anyị nri?
Enwe gị ụgbọ okporo ígwè njem, enye onwe gị ikike iji zuru ike na ịnabata ihe niile banyere ụgbọ oloko gị njem! The kasị pụrụ ịdabere na ebe ka akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè na- saveatrain.com n'ezie, ka – nweta movin '!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)